Ikhaya » Izindaba Zamuva » Chofoza lapha uma lokhu kungukukhishwa kwakho kwabezindaba! » IMacau GT Cup exhaswe ngabakwaSands China Title
I-Sands China Ltd. ibingumxhasi wesihloko somqhudelwano we-Sands China Macau GT Cup wale mpelasonto, owamukele abashayeli bezimoto zomjaho abavela emhlabeni wonke ukuthi baqhudelane emqhudelwaneni wedolobha osayinwe we-auto racing, iMacau Grand Prix.
Ukuxhaswa kweSands China kwalo mjaho kuyingxenye yokweseka okuqhubekayo kwenkampani ukuthuthukiswa kwezemidlalo nokuvakasha kwezemidlalo eMacao, ekukhuthazeni uhlelo lukahulumeni waseMacao lwezokuvakasha+. Kuphinde futhi kusekele ukuzinikela kukahulumeni ekubambeni i-68th Macau Grand Prix naphezu kwezinselelo eziqhubekayo zalolu bhubhane, emzamweni wokufaka amandla amahle emphakathini ngomcimbi oyisimangaliso wedolobha lonke.
Izikhulu zabaphathi beSands China Ltd. namalungu eqembu bebeholwa umongameli wenkampani uDkt. Wilfred Wong ukuze babone izimoto ezibhalwe uphawu lweSands China ekuqaleni kwegridi kanye nokuhambela umcimbi wokwethulwa kwemiklomelo ngemva komjaho ngeSonto.
Abashayeli abamele i-Macao, i-Hong Kong, kanye nezwekazi baqhudelane ku-Sands China Macau GT Cup, begijima ezimotweni zomjaho ezisezingeni eliphezulu kusukela e-Lamborghini, Aston Martin, Mercedes, Porsche, Audi, kanye ne-BMW.
I-Sands China yethemba ukuthi umjaho ungaba indlela yokweseka abathanda imidlalo basekhaya kanye nokugqugquzela amathuba okushintshana ukuze basize ukuphakamisa ukuncintisana kwabo kwamanye amazwe.
ISands China Ltd inomlando omude wokusekela ukuthuthukiswa kwemicimbi yezemidlalo eMacao. Le nkampani iye yaxhasa, yabamba, noma yahlela imicimbi yezemidlalo eminingi eminyakeni edlule, okuhlanganisa ne-basketball, ibhola lezinyawo, igalofu, isibhakela, ukugijima neminye eminingi. I-Sands China ivamise ukusebenzisa amathuba alethwa yile miqhudelwano nemidlalo yemibukiso ukuze isingathe imicimbi eyisizayo efana nemitholampilo yentsha nemicimbi egxile emphakathini ukuze iqhubeke nokuxhumana nomphakathi kanye nokwandisa umthelela omuhle wemicimbi edolobheni. Le nkampani ayizange inyakaze ekusekeleni kwayo imicimbi yezemidlalo eMacao, ngaphandle kobunzima obulethwe imvelo yobhubhane.